Nantsi indlela i-robotic aquarium ekhangeleka ngayo nge-HEXBUG AQUABOT jellyfish | Iindaba zeGajethi
UPedro Rodas | | Ikhaya, Robotics
Uyayithanda okanye uyayithanda iirobhothi kwaye ngekhe iwele engqondweni yakho ukuba kungakho iindlela zokuba ne-aquarium egcwele iirobhothi. Ewe, i-aquarium apho i-minnows kunye nezinye iintlobo zazineerobhothi ezizimeleyo ezincinci unokunika ubomi kuyo ngendlela enomdla kakhulu.
Ewe, olo luvo sele lunemizimba kwaye namhlanje sikubonisa omnye wabemi onokungeniswa kwi-aquarium yakho ukusukela ngoku irobhothi. Imalunga ne-jellyfish ye-HEXBUG AQUABOT.
I-HEXBUG AQUABOT jellyfish zirobotic jellyfish ezidada kwakamsinya nje ukuba uzifake emanzini amnandi. Ineentsika ezili-18 eziqhubela phambili ukuba zidade ziye phezulu ukuwa kamva phantsi kobunzima bayo. Njengoko ubona kwividiyo esiyincamathisayo, ukuhamba kwayo kuhle kakhulu kwaye kunokunika ukubanjwa kwetekhnoloji kule fenitshala apho uhlala ufuna i-aquarium kodwa ungazi ukondla abemi bayo.
Kuya kufuneka ubeke i jellyfish Hexbug aquabot emanzini kwaye iyakutshona ngokukhawuleza kwaye iphinde ibuye umva ngeentshukumo ezintle. I-aquarium yakho iya kuba yindawo entle yekorale kunye nale jellyfish engaqhelekanga ehlola indawo yonke. Ukusebenza kwayo isebenzisa iibhetri ezintathu ze-LR44 ezifakwe kwiphakheji.
Unganqikazi kwaye ujonge kwiwebhu esidibanisa nawe ke unokubona ezinye iindlela zokwenza iintlanzi kwaye ungazithengela eyakho. Awusenako ukuthi awunakuba ne-aquarium egcwele iirobhothi. Ixabiso layo li-14,99 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Yile nto i-aquarium erobotic ijongeka ngayo njenge-HEXBUG AQUABOT jellyfish